Tag: Shabeelaha | Sagal Radio Services
Wasaaradda Gaashaandhigga oo sheegtay in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay NO 50
Sagal Radio Services • News Report • October 5, 2016
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howl gal ka dhacay deegaanka Nambar 50 ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo lagu dilay dagalayahano ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa sheegay inay ka hor-tageen weerar xalay saqdii dhexe ciidamo Mareykan ah oo watay diyaarado qumaatiga u kaca ku soo qaadeen deegaanka Toora-Toorow ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada dowladda oo dib ula wareegay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe la wareegay deegaanada Mareerey iyo Sabiib oo ku dhow degmada Afgooye, kadib markii ay weerar ku qaadeen.
Wararkii ugu dambeeyay Fatahaada Wabiga Shabelle ee deegaano ka tirsan Sh/Dhexe (Sawirro)
Waxaa sii kordheysa cabsida laga qabo in Wabiga Shabelle uu ku fataho deegaano ka tirsan magaalada Jowhar, iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu wabiga ku fatahay Tuulooyin dhowr ah, halkaasoo dadkii degenaa ay ka barakaceen.
Maamulka Shabellaha Hoose oo beeniyay in doon sahay u siday ay afduubteen Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • November 24, 2014
Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa beeniyay wararka sheegaya in Doon sahay u siday ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Baraawe ay afduubteen Al-Shabaab.
C/qaadir Siidii “Howl galka Badweynta Hindiya wuxuu u hakaday isku xirnaan la’aan ciidanka ah”
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) aya sheegay in sababaha uu hakadka u galay howl galkii Badweynta Hindiya ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu yahay isku xirnaan la’aan ciidanka.
Ciidamada Dowladda iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay Shabellaha Hoose.
Sagal Radio Services • News Report • August 26, 2014
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Dowaladda Soomaaliya iyo Al-shabaab ayaa ka dhacay inta u dhaxeeya Deegaanada Janaale iyo Mubaarag ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Howlgalo dad badan lagu qab qabtay oo ka socda degmada Afgooye ee Sh/hoose
Ciidamada dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay ilaa saaka waxa ay howlgalo culus ka wadaan degmada Afgooye ee gobalka Sh/hooe, iyada oo dhaliyaro badan lasoo qab qabtay.